Malezia: Dera ho an’ilay lehilahy misarontava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2009 10:14 GMT
Matin'ny fijanonan'ny fo iray volana lasa izay ny mpanao gazety sady mpikatroka Syukree Hussain avy ao Malezia. 28 taona izy izao lasa izao. Niatrika mandrakariva ny fihetsiketsehana aseho amin'ny alalan'ny famelomana labozia fanao isan-kerinandro any Malezia i Syukree. Mahafantatra azy avokoa ny rehetra noho ny fanaovany sarontava. Nanaitra ny namany mpamaham-bolonfana sy mpitolona izao fahafatesany tampoka izao.
Nihaona tamin'i Syukree nandritra ny fihetsiketsehana fanao isan-kerinandro ho fanoherana ny lalàna momba ny fiarovana anatiny any Malezia i Anilnetto :
“Tsy dia mahalala zavatra maro momba azy manokana aho, misarontava matetika manko i Syukree. Eny, sarontava fanao amin'ny Halloween ireny. Nifantoka tany aminy ny fifantohan'ny maro tamin'ny alahady farany noho ny maha-hafahafa azy. Mivezivezy manodidina sy mifangaro anaty vahoaka izy ary manao ny fihetsika mampihomehy nefa mamoaka ny ao ampony. Kisendrasendra, raha mbola niteny i Zorro dia nipetraka teo anila ankavanan'i Zorro nikabary izy. Tamin'io fotoana io no nampahafantaran'i Zorro voalohany sy farany indrisy an'i Syukree tamin'ny vahoaka.”
Nampahatsiahy an'i Syukree i Estrelita :
“Hatokana hoan'i Syukree Hussain ny fijoroana (mitandabozia) halina. Hisy ny hanararaotra hilazalaza zavatra fohy aminy. Hafahafa ilay vavolombelon'ny fahatsapana ho very namana. Tsy fantatro izy. Fa tsy hoe tokony ho fantatro koa. Ny hany zavatra henoko nolazaina tamiko dia hoe “special” izy. Nijoro teo amin'izay inoany izy ary niaina araka ny fomba nokarohiny hiainana. Tsy maro amintsika no hahasahy hanao izany – 100% – fa farafaharatsiny amin'ny fomba hanaovan'i Syukree azy! Amin'iny lafiny iny, tsy nandainga tamin'ny tenany i Syukree ary tsy malahelo loatra aho raha maty tanora izy. Niaina tamin'ny fiainana manontolo izy ary tsy nisy very ny fiainany isan–segondra nandritra ny faha-28 taona niainany! Hotsarovana izy. Namela marika teto amin'ity tany ity ny tenany.”
Nanomana ny fihetsiketsehana hoe “Nono fa tsy baomba” tany Kuala Lumpur i Syukree. ireto avy ny bolongany: Seruan Keadilanon, sy Kuala Terengganu Untuk Pakatan Rakyat. Jereo ihany koa ny takelaka Flickr sy ny mombamomba azy ao amin'ny Facebook.
Ao ao amin'ny bolongan'i zorro-unmasked
Malay Mail mankalaza an'i Syukree ho olona nanam-pahasahiana:
“Ny tena mahavariana ahy, amin'ny mpisoratra anarana rehetra, dia tena niainany tanteraka ny fiainana “surrealiste”(tafahoatra ny zavamisy) ninoany. Maro ireo hafa niteny fa finoan'izy ireo ihany koa izany, saingy i Syukree no “sahisahy” kokoa amin'ny fomba tsy mahazatra nitondrany azy ireo.”
Ricecooker mahatsiaro koa an'i Syukree:
“Mahafantatra avokoa an'i Syukree ho ilay bandy tsy misaraka amin'ny solosaina findainy avokoa isika, ary raha manam-potoana izy dia miserasera avy hatrany, manao izay rehetra tiany atao, ary anisan'izany ny fanehoan-keviny any amin'ny takelaky ny hafa, mahafinaritra avokoa fa maro ireo voalaza ho manelingelina sy maharomotra.
“Fa efa voadaroka ihany koa tapabolana lasa izay i Syukree. mahatsiaro ilay zava-nitranga nahasosotra tany Teratak Dangdut gig taona maro lasa izay avokoa izahay rehetra, raha nivalandrano nifananatrika tamin'ny vondron'ny hardôsy (hardcore) niandry ny fanombohan'ny fampisehoana ireo! Efa voakomondry tao amin'ny Bau-Bau Cafe koa izy indray maka.”
Mino i E Contrario fa manana fiainana marevaka sy mamokatra i Syukree :
“Nitolona niatrika fanamby eo amin'ny lalamben'ny vanim-potoana iainantsika maro ny zatovolahy. Tsapako fa niezaka ny hampifandrindra zavatra mifanohitra amin'ny fiainana izy. Asehon'ny asasorany ny adin-tsaina nanjaka teo aminy teoamin'ny adihevitra lehibe tahaka ny fivavahana, politika, filozofia, sns. Feno sahan'adintsaina ny lohany.
“Niaina tao amin'ny fiainana maroloko sy namokatra i Sukyree — ary azo itokiana marimarina tokoa fa namela tsiaro lehibe teo amin'ny namany izy. Nanetsi-po antsika ihany koa ny fahoriany sy ny adin-tsainy. Ny kiakany mangina mahatonga antsika hijery izay ao am-pon'ny taranaka miady saina. Mampahatsiahy zavatra ihany koa ny fahalasanany: hay mora vaky ihany koa ny fiainan’ (ny tanora) mailaka sy kinga.”
Andramo jerena ity rakikira an-tsarin'i Syukree ao amin'i Youtube ity: